SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report ဖေါ်ပြချက်:လူပျိုလီဗာဝှမ်းထိပုတ်ပါ,တစ်ခုတည်း Hole အင်တုံပုတ်,လူပျိုအအေးတိုင်တိုင်,Lever Cold ထိပုတ်ပါ Up ကိုချီပါ,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > အင်တုံရောနှောထိပုတ်ပါ > အင်တုံရောနှော
အင်တုံရောနှော ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, လူပျိုလီဗာဝှမ်းထိပုတ်ပါ, တစ်ခုတည်း Hole အင်တုံပုတ် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, လူပျိုအအေးတိုင်တိုင် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
လူပျို Lever ကြေးဝါနှင်းဆီရွှေအင်တုံရောနှောထိပုတ်ပါ
ရင်ပြင်ရွှေရွှေအင်တုံ faucet brushed
7- ပုံသဏ္wireာန်ဝါယာကြိုး - ဆွဲရွှေအင်တုံ faucet
ရွှေ brushed ဝှမ်း Faucet ကြေးဝါကြွေထည်
နစ်မြုပ်လျှင်ရွှေဆောက်လုပ်ရေးအိမ်ဝှမ်း Faucet ကြေးဝါ
5 –Year Guarantee ကြေးဝါခရုမ်းအင်တုံရောနှောဆေးရောများ
တစ် ဦး တည်းကိုင်တွယ်ရေချိုးခန်းဝှမ်းနစ်မြုပ် Faucet
အပူနှင့်အအေး faucet လှပချောမွေ့သောဆလင်ဒါရေကန်
Deck Mounted ရေချိုးခန်းဝှမ်း Faucet ရွှေ
စတုရန်းက Black ဝှမ်းရောနှော faucet
high-end ၏အဓိကသည်တံဆိပ်မဟုတ်ပါ၊ faucet ball valve ceramic ဖြစ်သင့် ပြီးအဓိက metal သည် heavy metal content နှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်။ နှင်းဆီရွှေအင် တုံရောနှောဆေးတပ်ဆင်သည့် အဓိက အင်ဂျင် သည်ကြေးဝါဖြစ်သည် ။ ဘောလုံးအဆို့ရှင် ၏ကြွေပြားမာကျောမှုသည် ဝတ်ဆင်ရန်နှင့်တိုက်ခိုက်ရန်ခံနိုင်ရည်ရှိရန်လုံလောက်သည်။...
Handy Square သည် ပိုးထည်ကိုဆွဲကပ်ရန် ရွှေအင်တုံ faucet ကိုတပ်ဆင်ထားသည်၊ ၎င်းသည်အသွင်အပြင်အပေါ်ထူးခြားသောအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီးစတူဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းကိုခံစားနိုင်သည်။ သို့သော်ထိတွေ့မှုကအတော်လေးနူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးချုပ်နှောင်ထားသောအလှတရားကိုပြသည်။ ဖောင်းပွနေတဲ့ faucet ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုစိတ်မပူပါနဲ့။...
အင်တုံ၏အင်တုံရောနှောခြင်းနှင့်အင်တုံအကြားကောင်းမွန်သောဆက်နွယ်မှုမှာထွက်ပေါက်ကိုအပြင်သို့ကျစေသည်။ ဤသည်ကိုရေကော်လံအာကာသတက်ယူစရာမလိုဘဲလက်သို့အလျင်အမြန်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ရေနဲ့ပြaနာရှိတယ် ရေချိုးခန်းဝှမ်း၏ထွက်ပေါက် - ရေဖိအားများလွန်းသောအခါ faucet ရှိသည့်အခါရေကော်လံစီးကျသည် ဖွင့်သည်, ရေ splash ဖြစ်ပါတယ်။...
နေရာလေးကိုရဲ့ရွှေ w ပြာအင်တုံကိုထိပုတ်ပါဂရုတစိုက်ခိုင်မာတဲ့ texture နှင့်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်အတူမျိုးစုံဖြစ်စဉ်များမှတဆင့်လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်။ Antique Basin Mixer Faucets ဥရောပ၏ဂန္ထဝင်နှင့်ကြော့ရှင်းသောဒီဇိုင်းသည်သင်၏ရေချိုးခန်းအတွင်းတွင်လှပပြီးတင့်တယ်လှပသောအရောင်များကိုထည့်သွင်းပေးသည်။ go lden...
မကြာသေးမီနှစ်များကတည်းက Handy သည်တီထွင်မှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရိုးရာအလှဆင်ပစ္စည်းများ၏ကန့်သတ်ချက်များကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့သည်။ မျက်နှာပြင်ချေးခြင်းနှင့် ၀ တ်ဆင်မှုခုခံကာကွယ်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းအားဖက်ရှင်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဒြပ်စင်များပေါင်းစပ် ရန်အတွက် desktop basin faucets အသစ်များ၏ပုံပန်းသဏ္aာန်...
Brushing လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရေချိုးခန်းကုန်းပတ်တပ်ထားသော faucet သို့သတ္တုကိုယ်ထည်ကိုသယ်ဆောင်ပေးသည်။ အရ အဆိုပါ faucet ၏အလှဆင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန် , ကပြင်ပအင်အား၏အရေးယူမှုအောက်မှာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ textured နိုင်ပါတယ်။ Brush လုပ်ငန်းကိုသံမဏိသန့်စင်ခြင်းနှင့်နီကယ်ဆေးကြောခြင်းအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, လက်...
အိမ်သာဆေး၏အရည်အသွေးကိုခွဲခြားရန် Basin Mixer ကိုဝယ်ပါ။ ဦး ဆုံး chrome plating ၏တောက်ပမှုနှင့်အထူကိုကြည့်ပါ။ မျက်နှာပြင်သည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးပြည့်ဝသည်။ သုညပွဲ။ Handy ရေချိုးခန်းဝှမ်းထိုးဘားတစ်ခုလုံးကိုကြေးဝါအဖြစ်သွန်းသည်။ တုတ်လိုက်သောအခါအသံသည်မှေးမှိန်သွားသည်။ အထူးသဖြင့်အဆင်ပြေလွယ်ကူသည့်...
၅ နှစ်အာမခံကြေးဝါခရုမ်းအင်တုံရောနှောဆေးရောနှောဆေးများ Chrome အင်တုံ faucet ကြေးဝါ၏အဓိကကိုယ်ထည်တည်ဆောက်မှုသည် faucet ၏သက်တမ်းကိုခံနိုင်ရည်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုသေချာစေသည်။ တန်ပြန်ရေဆေးရေကန်အောက်တွင်သင့်တော်သည်။ အကြမ်းခံသောကြွေရောနှောသည့်အရာတစ်ခုနှင့်အရည်အသွေးအာမခံချက် ၅ နှစ် Single Lever Basin Tap ။ ရေချိုး အင်တုံ...
aucet,ft ကို AP အသုံးပြုမှုခ rass asin အများစုမှာခေတ်မီအိမ်ထောင်စုရေချိုးခန်းရေဆေးခ။ Handy's Brass Black Basin ရောနှောစက်တွင် အဓိကကိုယ်ထည်ကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောကြေးဝါဆွဲငင်အားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးတိကျမှန်ကန်သောစက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အနက်ရောင် Plated ဝှမ်း faucet...
အဘယ်ကြောင့် အိမ်သာ faucet chrome-plated ဖြစ်သင့် ？ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Washin Tap ကဲ့သို့သောနေရာများ သည်ရေတိုက်စားမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည် လေနှင့်ရေထိတွေ့သောအခါသံသည်သံချေးတက်ခြင်းမရှိသောကြောင့် \_ t ၎င်းကိုသံချေးမဖြစ်သောသတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်။ Chrome ဟာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၄...
အပူနှင့်အအေး faucet လှပချောမွေ့သောဆလင်ဒါရေကန် တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်ခြင်းနှင့်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောမှာ chrome အရောင်နှင့်မွမ်းမံ faucet ရောစပ်နေရာလေးကိုရဲ့ chrome အင်တုံ, မသာခြစ်ဖို့ခံနိုင်ရည်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းချေးနှင့် rust.Handy ရဲ့ Single-လက်ကိုင်လက်ဆေးအင်တုံ faucet, antibacterial ကျန်းမာနိမ့်ခဲ,...
အဆိုပါနေရာလေးကိုအလင်းဇိမ်ခံ High-grade ကိုအမှတ် 59 ကြေးဝါနှင့်ဆွဲငင်အားသတ္တုများပုံသွန်း၏ဖန်ဆင်းထားသည် faucet ရွှေလက်ဆေးအင်တုံ brushed ။ Brushed gold washbasin faucet အသွင်အပြင်ကိုပုံဆွဲခြင်းဖြင့်ကုသသည်။ ၎င်းသည်တောက်ပသောအရောင်များနှင့်မျက်နှာပြင်၏တောက်ပသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို Nordic...
Brushed gold faucet သည် faucet ၏သတ္တုမျက်နှာပြင်ကိုသန့်စင်ရန်ဖြစ်သည်။ Brush ကိုမျက်နှာပြင်ကုသမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည် ထုတ်ကုန်ကြိတ်ခြင်းနှင့်အလှဆင်ကစားခြင်းဖြင့် workpiece ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလိုင်းပုံစံဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးသက်ရောက်မှု။...
ရေချိုးခန်းအရောအနှောကိုရေအပူပေးစက်၏ရေပူနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသလား။ ဒါဟာချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်, လာမည့်ဆက်သွယ်မှု၏တည်နေရာကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါပူးတွဲရေအပူပေးစက်၏ရောနှောအဆို့ရှင်များ၏ရှေ့မှောက်၌, ဆိုလိုသည်မှာ ရေအပူပေးစက် ၏ ရေပူ အဆိုပါစုပ်၏ faucet သို့တိုက်ရိုက်စီးဆင်းနိုင်ပါတယ်။...
နှင်းဆီရွှေရေချိုးခန်းဆေးကြောခြင်းကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အရည်အသွေးကောင်းသောထုတ်ကုန်၊ ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်စီးပွားရေးကြာရှည်မှုသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အဓိကအချက်များဖြစ်သည် ၎င်း၏အသွင်အပြင်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ၏တစ် ဦး ပိုမိုနက်ရှိုင်းနားလည်မှု။ ရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ၀...
၁၆ ဝရာစုနှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောရေချိုးခန်းဝှမ်းထိုးတံဆိပ်သည်ကြေးဝါဖြင့်သွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ အဓိက function ကိုရန်ဖြစ်ပါသည် ရေထွက်ပေါက် switch ၏အရွယ်အစားနှင့်ရေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ပါ။ အစောပိုင်း faucets ဝက်အူ - ဓာတ်လှေကားအမျိုးအစားခဲ့ကြသည်, စျေးကွက်ထဲရှိ Single Lever Basin Tap အများစုသည်ကြွေထည်များဖြစ်သည်။...
နှင်းဆီရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကျောက်စိမ်းသည်ရှေးဟောင်းရေမှုတ်ဆေး faucet စျေးကွက်အတွင်းတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသောအင်တုံဆေး သည်အများအားဖြင့် chrome သို့မဟုတ် black ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ငါဒီ Handy's Rose ရွှေချယ်လှယ်ထားသောကျောက်စိမ်းအင်တုံဆေးကောင်ကို မိတ်ဆက်မည်။ ၎င်းသည်ရွှေနှင့်ကြေးနီသတ္တုစပ်ဖြစ်သည်။...
faucet အကြောင်း ခေတ်ရေစီးကြောင်းစျေးကွက်အမြဲငွေဖြစ်ခဲ့သည် သူငယ်ချင်းအချို့သည်ပင်စရိုက်ကိုရှာဖွေလိုကြသည် ကိုက်ညီဖို့လည်းခက်တယ် ဒါပေမယ့်အယ်ဒီတာပြောချင်တာက အမျိုးမျိုးသောအရောင်များကိုဘေးဖယ်ထား, ဖော်ပြခြင်းငှါမ နှင်းဆီရွှေ faucet သည် faucet တွင်ခေါင်းဆောင်သည် ခွက်ပုံသဏ္,ာန်, B ကိုဇယားကွက်တိုးတက်စေ လုံးဝကောင်းတဲ့လက်...
စျေးကွက်ရှိအမျိုးမျိုးသောရေချိုးခန်းအင်တုံအမျိုးမျိုး၏အရွယ်အစားနှင့်အရွယ်အစားမှာမတူညီပါ။ ဘုံများဖြစ်နိုင်သည် ရေ စို ခံ၊ အ စိုဓာတ်ထိန်းနိုင်သည့်အပြင်အကျင့်ပျက် ခြစားမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောအလူမီနီယမ်အလွိုင်း Basin Mixer Taps သို့မဟုတ်၎င်းသည်သံမဏိဖြစ်နိုင်သည် ပစ္စည်းများယနေ့ပေမယ့် အကြံပြုသူတွေကိုအတော်လေးအထူးဖြစ်ကြသည်။...
စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း၊ စျေးနှုန်းသက်သာသည်။ ရင်ပြင်က Black ဝှမ်းရောနှော faucet အဓိကကိုယ်ထည်သည်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောကြေးဝါဆွဲငင်အားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးတိကျမှန်ကန်သောစက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်ဘုံပိုင်ရေတွင်ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများ၏တိုက်စားခြင်းကိုတွန်းလှန်နိုင်သည်။ အနက်ရောင် Plated...
အနက်ရောင်ရေချိုးခန်းအရောအနှောများသည်ကြည့်ကောင်းရုံသာမကတာရှည်ခံသည်။ အသွင်အပြင်အပြင်အရေးကြီးဆုံးမှာအရည်အသွေးကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါအချက်များမှအရည်အသွေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ၁။ မျက်နှာပြင်ကိုကြည့်ပါ ခံစားမှု ၃ ကိုကြည့်ပါ၊ အသံ ၄ ကိုနားထောင်ပါ၊ ထောင့်အဆစ် ၅ ကိုထိပါ၊ အဆို့ရှင်ကိုစစ်ဆေးပါ တိုတောင်းသော,...
တရုတ်နိုင်ငံ အင်တုံရောနှော ပေးသွင်း
· အင်တုံရောနှောစက်သည်သင်၏ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်းများကိုလိုက်နာနိုင်သည်။ အရောင်များကိုရွှေ၊ ကြေး၊ စိမ်နီကယ်၊ ရှေးဟောင်းကြေးနီ၊ ရေနံပွတ်ကြေး၊ နီညိုရောင်၊ မုန့်ဖုတ်စသည့်အရောင်များကိုစိတ်ကြိုက်အရောင်များတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဖုံးကွယ်ထားသောနံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသောအင်တုံရောနှောခြင်း၊ ။
တစ်ခုတည်း Hole အင်တုံပုတ်
Lever Cold ထိပုတ်ပါ Up ကိုချီပါ